Fampianaran-diso (fivavahana) - Wikipedia
Ny fampianaran-diso na finoan-diso na herezia na heresia, raha ara-tantara, dia fampianaram-pinoana izay heverin'ireo ao amin'ny fivavahana arahin'ny maro anisa, na ao amin'ny fivavahana ofisialy, fa mifanohitra amin'ny fampianarana marina tena izy (izay atao hoe ortodoksia). Nampiasaina indrindra ny teny hoe heresia tamin'ny tantaranan'ny fivavahana kristiana hanoherana ireo manao fampianarana (doktrina) na tenim-pinoana (dogma) momba an'i Kristy sy ny Trinite na lohahevitra hafa tsy mifanaraka amin'izay tapaka amin'ny konsily, indrindra ny tamin'ireo konsily ekiomenika. Matetika dia ampangaina ho manao fampianaran-diso ny mpifanandrina ara-pampianarana amin'ny tena.
Galileo Galilei dia voaheloka amin'ny heretika
Atao hoe heretika na ny mpampiana-diso ny mpanaraka finoan-diso. Ny mpitarika na ny lehiben'ny herezia iray dia atao ho hereziarka (grika: αἱρεσιάρχης / hairesiárkhēs), ny fandalinana ny herezia dia atao hoe hereziolojia, ary ny mpandalina ny herezia dia atao hoe hereziologa.
Tamin'ny Andro Taloha dia nenti-nilaza ny sekolim-pandinihana iray manokana ny teny grika hoe αἵρεσις / haíresis, ka ohatra amin'izany ny zaridainan'i Epikorosy na Epikora. Nanjary nanana hevitra fanaratsiana ny teny hoe hairesis teo amin'ny asa soratr'ireo mpanao tantaram-pivavahana manaraka ny Trinite (dia ny Katolika sy ny Ortodoksa tamin'izany fotoana izany), ary hatramin'izay dia nenti-nanondro fiheverana, fampianarana, na tenim-pinoana heverina fa mivaona amin'izay nekena na heverina fa zavatra efa azo tsy tokony hovana eo amin'ny sehatry ny fandinihana sy ny fahalalana ary ny fivavahana..
Nampiasaina hilazana ny zava-mitranga ao amin'ireo fivavahana hafa toy ny finoana silamo sy ny jodaisma, sns koa ny teny hie herezia taty aoriana. Miitatra hatrany ny hevitry ny teny hoe herezia ka ilazana izay fampianarana sy fiheverana rehetra mifanohitra amin'izay heverina fa efa eken'ny be sy ny maro, na tsy momba ny fivavahana sy ny finoana aza izany.
Ny teny nogasina hoe herezia na heresia, izay nadika hoe fampianaran-diso na finoan-diso, dia avy amin'ny teny grika hoe αἵρεσις / haíresis izay midika hoe "safidy", izany hoe fisafidianana hevitra na fiheverana iray. Tamin'ny Andro Taloha izay nanaovana fivavahana manaraka fombafomba kokoa fa tsy voafaritra ara-pampianaram-pinoana dia tsy nanana heviny ratsy ny teny hoe haíresis, tsy tahaka ny fampiasana azy teo amin'ny fivavahana kristiana. Tamin'ny taonjato voalohany taor. J.K. dia mbola nampiasa ny teny hoe haíresis i Flavio Josefa mba hilazany ireo sekoly ara-pivavahana sy ara-pilozofia samihafa.
Tsy tokony hafangaro ny fampianaran-diso (na herezia) sy ny fandavana ny finoana (na apostazia) izay fialan'ny olona iray amin'ny fivavahana narahiny. Tsy afangaro amin'ny fitetenan-dratsy an'Andriamanitra sy ny zava-masina (na blasfemia) koa izany.
↑ "Hérésie", in Microsoft Encarta 2009. 1993-2008 Microsoft Corporation.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fampianaran-diso_(fivavahana)&oldid=980366"
Dernière modification le 15 Febroary 2020, à 20:55
Voaova farany tamin'ny 15 Febroary 2020 amin'ny 20:55 ity pejy ity.